ဓမ္မအလင်းရောင် စာကြည်တိုက်ဖွင့်ပွဲ နှင့် စာပေဟောပြောပွဲအခမ်းအနားဖိတ်ကြားRemarks by President Obama and President Thein Sein of Myanmar After Bilateral Meetingအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိပုံတူ မဟာဗောဓိစေတီတော်မြတ်အား ဌာပနပိတ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည်Uzinblue and United States institute of Peace and Media and Conflict Research Team.TROPICAL CYCLONE MAHASEN Alternate Tracking Map	SWITZERLAND-MYANMAR-POLITICS-EUROPE
Thursday, 14 June 2012 19:26 | Written by uzinblue | ဆွဇ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့တွင် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် - ILO ၏ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်၊၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ် ထွက်ခွာလာသည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဆွဇ်ဇာလန်၊ နော်ဝေ၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်နှင့် အိုင်ယာလန် နိုင်ငံများသို့ ၂ ပတ်ကျော်ကြာ လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီး နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့တွင်
၁၉၉၁ ခုနှစ်က သူမကို ချီးမြင့်ခဲ့သည့် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုအား ကိုယ်တိုင် လက်ခံရယူမည်ဖြစ်သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်က သူမကို ချီးမြင့်ခဲ့သည့် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုအား ကိုယ်တိုင် လက်ခံရယူမည်ဖြစ်သည်။SWITZERLAND-MYANMAR-POLITICS-EUROPEMyanmar democracy icon Aung San Suu Kyi givesaspeech at the International Labour Organization (ILO) annual conference on June 14, 2012 at the United Nations Office in Geneva, during her first trip to Europe since 1988.
Suu Kyi will visit Switzerland, Norway, Britain, France and Ireland on her more than two week tour, which will includeaspeech in Oslo to formally accept the Nobel Peace Prize that thrust her into the global limelight two decades ago. AFP PHOTO / SEBASTIEN FEVALAFP
Last Updated (Thursday, 14 June 2012 19:51) ပြည်တွင်းပြည်ပကျောင်းတိုက်များ